Tsaho nahatonga savorovoro teny Namontana: tsy mpangala-jaza akory ireo telo lahy nenjehin’ny fokonolona | NewsMada
Nitondra fanazavana mikasika ilay tsaho niely nampisavorovoro teny Namontana, ny alahady teo, ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Tsy mpangala-jaza velively, araka ny tsaho naely, hay ireo telo lahy nifanenjehan’ny fokonolona.
Herinandro latsaka kely taorian’ny savorovoro nitranga teny Namontana, ny alahady lasa teo, ny amin’ny fisiana telo lahy voalaza fa hoe mpangala-jaza izay nifanenjehan’ny fokonolona, nitondra fanazavana ny eo anivon’ny polisim-pirenena amin’ny alalan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny ”police judiciaire”, ny ”commissaire divisionnaire Seraly Hercule, fa nisy tokoa ilay savorovoro niseho tamin’iny alahady iny. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana, hita fa tsy mpangala-jaza ireo olona ireo. Rehefa nohamarinina dia hita fa maty ny zanak’ireo olona ireo, ny olona samy mpiara-monina no nitondra ilay fatin-jazakely entina halevina. ”Nisy olona nanely tsaho nilaza fa hoe mpangala-jaza izy ireo ka nahatonga iny savorovoro iny izany, saingy soa ihany fa nalaky tonga ny polisy niaro ny ain’ireo saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ireo”, hoy hatrany ity manamboninahitra eo anivon’ny polisim-pirenena ity.
Enjehin’ny lalàna ny fanelezana tsaho…
Nohamafisiny hatrany fa tsy azo atao ary enjehin’ny lalàna ny fanelezana tsaho sy fanomezana vaovao tsy marina toy izao fa mety hitarika fahafatesana olona. ”Entanina, araka izany, ny tsirairay mba hanamarina ny zava-teneniny fa sao hitarika fahafatesana olona izany”, hoy izy. Izao ny voka-dratsin’ny tsy fahafehezana ny fampiasana itony ”facebook” itony. Taitaitra eo dia manely tsaho sy tsy mandinika akory ny sasany fa faly manaparitaka vaovao tsy marina. Ny sasany rahateo koa moa, tsy mandinika fa na inona na inona vaovao aelin’ireo tsy misy atao, mandray an-tendrony (manaparitaka avy hatrany sy manao commentaire) fa tsy mandanjalanja sy manamarina akory ny fisian’ilay vaovao misy manaparitaka. Misy ireo olona tsy misy atao sy mahita tombontsoa ao anatin’ny fanakorontanana ka manely vaovao tsy marina sy/na tsaho. Tranga efa nisy teto izany toy ilay lehilahy nilaza fa nirodana ny tonelina Ambanidia. Ity resaka ”facebook” ity ihany koa no nahavoasoketa ny polisy fa hoe namotsotra ireo jiolahy tamin’ilay fanafihana mody ”sarimihetsika” nataon’ireo telo vavy mpiasa tao amin’ilay ”cash point” eny Itaosy. Ilaina ny ”facebook”, saingy tokony holanjalanjaina ihany ny fampiasana azy ireny mba tsy ho tonga amin’ny fanasoketana toy izao. Ilaina izy satria tamin’ny ”facebook” no nahitana ireo fiaram-panjakana nentin’ny olona nanaovana mariazy, mijanona amin’ny toerana tsy tokony hijanonana ka nahafahan’ny fanjakana avy hatrany nandray fepetra. Santionany ihany izany fa anjaran’ny tsirairay ny mandray izay hitany fa mety amin’ny fampiasana ireny ”facebook” ireny (na olon-dehibe io na ankizy), saingy aoka anefa mba tsy hanohintohina ny filaminan’ny hafa na koa hiafara amin’ny ain’olona izany tsy hisian’ny fifanomezan-tsiny. Izay voa aza tezitra!